Suuqa Sida Blogger Hooyo | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 12, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Chris Lucas
waxay leeyihiin ayaa beryahan ku jiray wararka jacaylkooda badeecadaha bilaashka ah iyo faa'iidooyinka ay la yimaadaan si wanaagsan loola socdo dumarka-daacadda ah.
Maxaa ka dhigaya bloggers hooyada sida koox la raadinayo ee ka socda PR faa'iidooyinka iyo suuqleyda ayaa ah inay abaabuli karaan kooxo badan oo haween ah (badiyaa), oo ku kalsoon kalsoonida waxay yiraahdaan, waxay isu dhisteen la taliyeyaal lagu kalsoon yahay, oo ogaada waxa bulshadoodu rabto. Marka, maxay suuqleydu ka bartaan bloggers-yada hooyada?
Noqo qof naxariis leh:
Dareenka ay leeyihiin hooyooyinka wax qora ee bloggers-ka ah lama been abuuri karo oo xiisaha aad u qabtid ganacsigaaga waa inaan sidoo kale la been-abuurin. Bogagga ugu guulaha badan ayaa ah kuwa lagu dhisay shucuur ay u qabaan wax qoraha leeyahay, qoyskooda, shaqadooda iyo qoyskooda, iwm. Suuqgele ahaan waxaad u baahan tahay inaad qeexdo waxa shirkaddaadu xiise u qabto. 37 Calaamadaha waxay dhistay dad aad u tiro badan oo raacsan hareerahooda hamigooda ah software fudud oo wax ku ool ah.
Kormeerka Ololaha waxay dhistay qalab suuqgeyn email oo aad u weyn oo ku saabsan xiisaha emayllada si wanaagsan loo qaabeeyey. Wax kastoo hamigaagu yahay, ka dhig mid ka dhex imanaya suuqgeyntaada oo xusuusnow, macaamiishaadu waxay u sheegi karaan xiisaha dhabta ah waxa la soo saaray!
Ku xirnaanshaha akhristayaashooda ayaa ah waxa bloggers ugu fiican ay sameeyaan. Waxay yaqaanaan badhannada ay riixayaan iyo sida loogu wado akhristayaashooda ficil maxaa yeelay waxay leeyihiin isku xirnaan guud. Sure, maahan in dhammaan suuqyayaashu ay yeelan karaan dammaanad gaar ah sida hooyonimada macaamiishooda, laakiin waxay ka heli karaan nooc ka mid ah iskuxirka guud.
Suuqgeeye ahaan waxaad u baahan tahay inaad fahamto waxa macaamiishaadu u baahan yihiin iyo sida aad ula xiriiri karto. Haddii ay tahay iyada oo loo marayo a sahan online fudud, ama iyada oo loo marayo aalado kale oo khadka tooska ah ah sida Warbaahinta Bulshada, helitaanka hab lagula xiriiro macaamiishaada ayaa muhiim u ah adduunka maanta ee suuq-geynta hal-hal-ka.
Isu soo bax Sabab ah:
Qaar badan oo ka mid ah hooyooyinka blogger-ka ah ayaa isu soo uruuriyay sabab. Hadday tahay cudur ama Kukiyada Girl Scout. Ganacsi ahaan hamigaaga waxaa laga arki karaa waxaad aaminsan tahay. Haddii aad leedahay arrin bulsheed oo miyir qabo ama sabab u tahay qalab fudud, waxtar badan, waxaad isu soo ururin kartaa macaamiishaada iyo macaamiishaada mustaqbalka waxaadna ka dhigi kartaa u-doodayaasha sumaddaada oo lagu dhisay caqiido la wadaago.
Xaaladda marka la eego, Salesforce si dhakhso leh ayaa loogu yaqaanay No Software CRM oo hadda waxay ku faantaa 59,000 shirkado inay yihiin kuwa isticmaala xalkooda. Waxay ka soo baxeen iyagoo lidi ku ah xalalka hoos ku xusan ee CRM ee ku saabsan server-yada shirkadda iyo dimoqraadiyeynta CRM adiga oo kuu oggolaanaya inaad marin u hesho xogtaada meel kasta oo adduunka ah.
Ethos waxay samaysay sumad biyo ah agagaarka sabab - biyo nadiif ah oo carruurta - waxayna ka caawisay inay ku gaarto qaybinta iyada oo loo marayo Starbucks. Markaad iibsato Ethos waxaad u iibsaneysaa iyada oo la aaminsan yahay in carruurtu leeyihiin biyo nadiif ah. Sumaddaadu waxay u baahan tahay inay u istaagto wax taagan, laakiin xusuusnow haddii aad wax walba u taagan tahay waxba uma istaagi kartid… markaa si xikmad leh u dooro.